स्याङ्जा । वालिङ नगरपालिकाले खरका छाना हटाउने अभियान शुरु गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको पाँचौँ नगरसभाले नगरभित्रका खरका छाना हटाएर जस्तापाता लगाइदिने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसँगै लागत सङ्कलनपश्चात ज...
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको काउसिन्लरमा डा. ज्ञवालीको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको निर्वाचन यहि माघ २५ गतेका लागि तय भएको छ । उक्त निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशबाट काउन्सीलरका पदमा वृहत प्रगतिशील एवम समावेशी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रक...
सबैभन्दा नजिकबाट लिइएको सूर्यको तस्बीरले यस्तो बताउँछ..
एजेन्सी । बेलायतका अन्तरिक्ष विज्ञहरूले सुर्यको अशान्त सतहको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सुर्यको उक्त सताहको कुनै पनि फोटो सार्वजनिक भएको थिएन । बीबीसीको रिपोर्टअनुसार, हवाईन आइल्याण्ड(Hawaiian ...
पत्रकारलाई जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ : महासङ्घ
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारलाई जा...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले दुई किलोग्राम २०० ग्राम कोकीनसहित एक विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले अवैधरुपमा कोकिन ओसारपसार कार्यमा सङ्लग्न बोलिभियन नागरिक सोल्यानो क्याभ...
जीवनमा प्रयोग हुने शिक्षा दिन आवश्यक छ – पूर्वराष्ट्रपति यादव
तनहुँ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमितामा दिनुपर्ने बताएका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका–११ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई बिहीबार सम्...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी वैचारिक स्पष्टता विना अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन । सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट वैचारिक...
काठमाडौँ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले ल्यान्डफिल्ड साइटको वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । कामपाका प्रमु...
झापा । आफ्नै सात वर्षीया छोरीलाई करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले कानकाई नगरपालिका–१ निवासी एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । मादक पदार्थ सेवन गरी छोरीलाई करणी गर्ने ३० वर्षीय बुबालाई पक्राउ गर्दै मङ्गल...
चितवन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश नम्बर ३ कार्यालयले घुससहित एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनमा कम्युटर अधिकृतको दरबन्दीमा कार्यरत रामकुमार अधि...
बागलुङ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजारमा रहेको गलकोट घुम्टे कपास उद्योगमा मङ्गलबार आगलागी भएको छ । आगलागी हुँदा कपास उद्योग पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । विद्युत चुहिएर आगलागी भएको कपास उद्य...